M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi - Forex Indicators Download
Home MT4 Indicators M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi
M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi
M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi bụ a na-emekarị egosi. Nke a na egosi dịtụ mfe iji na-atụ aro maka beginners. Ọ dabeere na olu na-agụ Ogwe.
Ọ kasị mma maka ụdị ọ bụla nke Forex ahia; scalper, ogologo okwu ahia ma ọ bụ intraday ahia. Ọnụego ịtụkwasị na-emechi gị trades ga-adabere na timeframe na ị họọrọ. Ọ bụrụ na ị na-eji a uko timeframe, ị ga-emeghe na-emechi gị iwu na a ngwa ngwa karịa ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi iji a aba timeframe.
Ịghọta na-arụ ọrụ nke I_sadukey_v1 egosi.
The I_sadukey_v1 egosi na egosiri na isi trading chaatị. Ọ na-egosipụta dị ka a akara na-eso ahịa ahịa na-agbanwe ya na agba dabere na-emekarị ka kpebisiri ike na-enwe mmeri n'oge. The akara na-kpụrụ nke obere igbe onye ogologo dịgasị dabere na ike nke na-emekarị. Ọ bụrụ na ndị na-emekarị ike dị elu, na ogologo nke igbe ga-amụba na ibelata mgbe ike nke na-emekarị mbelata. Onye ọ bụla igbe akpụ akara na-kpụrụ kwekọrọ bụla ndọba oriọna na-kpụrụ.
The igbe na-etolite na akara bụ ndị ma-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara na-adabere na-emekarị. N'adịghị ka ihe ndị ọzọ na-egosi ebe red-egosi a ala na-emekarị na-acha anụnụ anụnụ ihe uptrend, Nke a na egosi na-eji red na-egosi ihe uptrend na-acha uhie uhie na-egosi a ala-emekarị.
Fig.1. The i_sadukey_v1 egosi.
The red boxed ngalaba nke akara na egosiri n'okpuru idọba-oriọna mgbe-acha anụnụ anụnụ boxed ngalaba a kpụrụ n'elu idọba-oriọna. Ma kama kasị egosi ndị na-enye ha mgbaàmà mgbe ahịa ahịa obe ngosi akara, Nke a na egosi na-ewe oge ụfọdụ tupu enye mgbama nke na-enyere na alienating ụgha n'ókè.
Mgbe ị na-ịdọrọ egosi ma ọ bụ na fanye egosi n'elu trading chaatị, omenala egosi i_sadukey_v1 gbapụta window ga-apụta. Ọ bụrụ na ị pịa input button, ị ga-ahụ abụọ ntinye nke bụ countBars na nd. The countbars atọrọ 1000 ndabara, na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke na-ama kpụrụ mmanya / idọba-oriọna ngosi ga gụọ na chaatị ozugbo kwajuru / etinyere. Ọ bụrụ na ị ibelata countbars uru, ngosi ga-egosipụta na a nta ọnụ ọgụgụ nke na-ama kpụrụ idọba-oriọna na chaatị mgbe mbụ etinyere na-abụghị na-adị mgbe uru na-ụba. The nd na aka nke ọzọ na-eji na-akọwa na ọnụ ọgụgụ nke igbe a ga-akpụ na akara. Onye kasị nta uru na i nwere ike iji maka nd uru bụ 2; ebe-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara ogologo Ogwe ga-egosipụta na otu isi kama ịbụ gbasara a ogologo ngalaba nke akara. Ọ bụrụ na a bara uru nke 1 a na-eji na nd uru, ihe ọ bụla ga-egosipụta.
Iji i_sadukey_v1 egosi ebe na nso iwu.
Zụrụ iwu na-enịm mgbe ahịrị ngalaba atụgharịa Red mgbe ere iwu na-enịm mgbe ahịrị ngalaba atụgharịa-acha anụnụ anụnụ. Iwu na-ebe na-atọ ma ọ bụ nke abụọ ndọba oriọna na-akpụ mgbe na agba mgbanwe. Ọ dịghị ahia ga-eme / enịm mgbe pụta idọba; na ahia kwesịrị ichere maka ọzọ mgbaama ma ọ bụ anya n'ihi na a mgbaàmà ndị ọzọ ego na abụọ ma ọ bụ na ndị ọzọ timeframes.
Fig.2. Iji i_sadukey_v1 egosi ahia.
Trades na-emechi mgbe ngosi enye ihe na-abụghị mgbaàmà. The na-ere ọnọdụ na-emechi mgbe agba mgbanwe red na Buy iwu na-emechi mgbe agba mgbanwe acha anụnụ anụnụ.
M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba ihe mere eme data.
M Sadukey bọmbụ V1 Forex egosi na-enye ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Olee otú iji wụnye m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4?
Download m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4
Copy m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Right click na m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4
Egosi m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4 dị na gị Chart
Esi wepụ m Sadukey bọmbụ V1 Forex Indicator.mq4 gị Metatrader 4 chaatị?
M Sadukey bọmbụ V1
n'isiokwuDirection Forex egosi
isiokwu na-esonụTrader Wawasan Forex egosi